Waa maxay Nacaybka Khaniisiinimadu?
Subject: Waa maxay Nacaybka Khaniisiinimadu? Mon Jul 19, 2010 10:16 pm
Nacaybka Khaniisiinimada xaraf xaraf marka lagu macneeyo waxuu macnaheedu noqdaa ‘ka cabsasho wax isku mid ah’ hasa yeeshee kelmada ‘khaniis’ ayaa tixraac ahaan loogu isticmaalay khaniisiinta markii kelmadan la curinaayay. Waxaa jira turjumaadyo faro badan oo kala duwan hasa yeeshee nooc ka mid ah noocyada ugu muhiimsan dhinaca fikradaha Nacaybka Khaniisiinimadu waxay yihiin iska necbaansho lagu hayo Khaniisiinta, wiilasha, gabdhaha, qofka labada jinsi u taga iyo qofka jinsigiisa bedela.
Nacaybka Khaniisiinimadu waa cabsi ama cadaawo laga qabo xaga dadka Khaniisiinta oo dhan. Waxaana nacaybkan sida badan lagu muujiyaa si maqal iyo muqaal leh mararka qaarkoodna dagaal leh.
Hadaba iyada oo aanay jirin sabab kali ah oo farta lagu taagi karo ayaa daris cilmi baadhis ahi cadaysay in iska necbaanta xaga dadka khaniisiinta iyo khaniisnimada ay raad ku yeelan karto haddii uu qofku haysto citiqaad diineed oo adag taas oo diidaysa wasmada iyo khaniisnimadaba, la dhaqan la’aan wiilasha iyo gabdhaha khaniisiinta iyo fikrad xun oo ku saabsan noocyada kala duwan ee dabeecadaha galmada kaas oon midkoodba ubad abuurin ama guur ka dhex dhacin.
Dadka yar yar dhexdooda waxa ka dhex dhici karta Nacayb Khaniisnimo taas oo ka dhalata marka wiilka ama gabadhu ku dhaqmi waayaan astaamaha jinsigooda u gaarka ah. Tusaale ahaan wiilashu inay mujiyaan raganimo iyo ciyaartoynimo gabdhahuna jajabni guri daryeeleed ama barbaarin shucuur leh, waxa dhacda in loo xoog sheegto oo lagu caayo in ay khaniisiin yihiin. Wiilasha kuwa hablaha raaca ama muujiya jil jilicsanaan waxa loogu yeedhaa ‘badh-naagood’ ama ‘nimow naag’. Gabdhaha kuwa muujiya karti adag oo dumareed ama ciyaara ciyaaraha wiilasha waxaa loogu yeedhaa ‘Wiilo’ ama ‘Geelo’.
Hadaba nacaybkan waxa laga yabaa in wiilasha aad la isaga sii necbaado marka gabdhaha loo eego. Sababta keentayna waxay tahay xuduudaha u yaala jinsiyada wiilasha ayaa aad uga adag tan gabdhaha.
Maadama oo Khaniis iyo kelmedaha la mida ay dhalinyaradu si xun u isticmaalaan sidii wax cay ah oo kale ayaa keenta in khaniisnimadu tahay wax aad u arag daran oo fool xun. Iyo dhaqanka Soomaalida oo aanay erayga khaniis ceeb iyo cay mooyee macno kale lahayn.
Siyaabaha arintani wax u saamaysaa waxa weeye inay cabudhiso dareenka khaniisnimo ee dadka dhalinyaradu dareemayeen, iyada oo kalifta in qaarkood difaac galaan iskana dhigaan in ay jinsiga cakiskooda u hamoodaan oo ay ka qayb galaan foorjada Nacayba Khaniisiinimada, iyada oo horseeda in ay ka takoormaan kuwa cadaystay galmadooda cabsi ay ka qabaan cayda awgeed iyo iyada oo qofka ku abuurta dareen murugo iyo nacaybleh oo la socota ilaa iyo noloshiisa oo dhan.
Haddii aanuu qofku helin mudadan uu koraayo mucaawimo, fahmid iyo akhbaar waxay badanaa qofka gelisaa marxalad walaac leh, farxad lahayn, iyo murugo taas oo xalaadaha ugu daran qofka ka gaadha heer uu isku dilo.
Is Diiwaangalintaa : 08/06/2010
Subject: Re: Waa maxay Nacaybka Khaniisiinimadu? Tue Jul 20, 2010 3:50 am
Subject: Re: Waa maxay Nacaybka Khaniisiinimadu? Tue Jul 20, 2010 3:53 am
Subject: Re: Waa maxay Nacaybka Khaniisiinimadu?